Ilhaan Cumar oo ka baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda ninkeeda. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News Ilhaan Cumar oo ka baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda ninkeeda.
Ilhaan Cumar oo ka baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda ninkeeda.
Walwaal Online; Saacadihii u dambeeyey waxay warbaahinta reer Galbeedku aad u hadal haysay sheeko ku saabsan gabadha Soomaaliyeed ee Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka inay xiriirkii shaqo u jartay shirkadda la talinta dhinaca siyaasadda ee uu leeyahay seygeeda ay dhawaan guursatay.
Previous article”Waxaa nalaku duqeeyey dayuurado casri ah” – Maamulka Tigreega oo qayladhaan u diray Beesha Caalamka Maxaabiis kumanaan ah oo
Next articleMaansada: Dabac hayga soo filan